बोक्सीको बल्छीमा महिलालाई कहिलेसम्म झुन्ड्याउने?" - DURBAR TIMES
HomeNewsबोक्सीको बल्छीमा महिलालाई कहिलेसम्म झुन्ड्याउने?"
बोक्सीको बल्छीमा महिलालाई कहिलेसम्म झुन्ड्याउने?”
उनी घटना विवरण सुनाउँछन्, “आमालाई रातिको बेला घरबाट घिसार्दै ल्याई पञ्चायती माझ रक्ताम्मे बनाइयो।”
महिलाविरुद्ध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, परम्परा वा अन्य आधारमा शारीरिक-मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमका हिंसाजन्य कार्य हुँदा स्थानीय ‘पञ्चायत’ले नै यसलाई छिनोफानो लगाउने प्रवृत्ति नेपाली समाजमा कायमै देखिन्छ।
त्यस्तो गर्नुको मुख्य कारणमा कतिपयले मान्दै र विश्वास गर्दै आएको ‘डायन’ अर्थात् ‘बोक्सी’ बाट सुरक्षा गर्नु रहेको बताइन्छ।
अरू समयको तुलनामा दशैँमा “बोक्सीहरू बढी सक्रिय हुने” अन्धविश्वास छ।
घटस्थापनादेखि नै छोराछोरीलाई घरबाट बाहिर निस्किन नदिने, निस्किन दिए पनि ‘तन्त्रमन्त्र’ गरेर मात्र निस्किने दिने चलन मधेशका गाउँघरमा कतैकतै अद्यापि देखिन्छ।
त्यस्तै “बोक्सा-बोक्सीको मेला” वा “झाँक्री खेलाउने मन्दिर” ले बेलाबखतमा चर्चा पाइरहन्छन्।
उनी भन्छन्, “नयाँ पुस्तामा आएको सचेतनाका कारण यसलाई थोरै चिर्न सकिएको छ।”
कोरोनाभाइरस महामारीका बेला खासगरी प्रदेश नं २ मा यस प्रकारको घटना एकपछि अर्को उजागर हुँदै गर्दा जनमानसमा प्रश्न उठेको छः “आखिर बोक्सीको बल्छीमा महिलालाई कहिलेसम्म झुन्ड्याउने?”
“देशमा जुन तन्त्र आए पनि समाज अझै पनि परम्परावादी सोचबाट निर्देशित छ, ” महिला अधिकारकर्मी रीता साह भन्छिन्, “महिला अधिकारको कुरा गर्दा के बिर्सिनु हुन्न भने महिलाहरूले सम्मानका लागि मात्र होइन, शक्ति र अधिकारका लागि समेत लड्दै गरेका हुन्।”
उनका छोरा गणेश प्रसाद भन्छन्, “सरकार नजिक छ भने पनि खै कतै हामीले त देखेनौँ।”
Previous article१३१३ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि, उपत्यकामा ६४५
Next articleलोक सेवाले स्थगित भएका परीक्षा कात्तिकदेखि सुचारु गर्ने